ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Apple ID မှာ Other Region မှ US Region ချိန်းချင်ရင် — Anycall Mobile
ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Apple ID မှာ Other Region မှ US Region ချိန်းချင်ရင်
By Naw Htoo Aung January 13, 2021 1 Min Read
လက်ရှိကိုယ်သုံးချင်တဲ့ Apple ID Region က Application တွေ မစုံလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ခြားအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် US Region ကို ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနည်းလေးအတိုင်း ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ပထမဆုံး App Store ထဲဝင်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်မှာရှိတဲ့ ကိုယ့် Profile ထဲ ဝင်လိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ ကိုယ့် Apple ID Account ထဲ ဝင်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ Country/Region ထဲ ဝင်လိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ Change Country or Region ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ကိုယ်ပြောင်းတဲ့ Region ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။ ဒီနေရာမှာတော့ US Region ကို ပြောင်းချင်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် United States ကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ်။
ပြီးရင်တော့ Agree ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် နောက်ထပ် Agree ကို ထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ Payment Method ကို None ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။ ဒီနေရာမှာ ကိုယ့် Apple ID Account က iTune Gift Card အသုံးပြုပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ None ကို ရွေးလို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးရင်တော့ လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို အောက်မှာပြထားတဲ့ ပုံလေးအတိုင်း ဖြည့်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်မှာရှိတဲ့ Next ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ Apple ID ရဲ့ Region ဟာ US Region ကို ပြောင်းသွားပါပြီ။ အားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေ။
Apple IDUS Region
Author Naw Htoo Aung
Signal ဆိုတာ ဘာလဲ? ဘာကြောင့် Signal ကို အသုံးပြုသင့်တာလဲ?
Facebook သုံးမရတော့ရင် VPN ဘယ်လိုကျော်ပြီးသုံးမလဲ?